Imithetho yokusebenzisa ikhamera efihliweyo | Izisombululo ze-OMG
Imithetho yokusebenzisa ikhamera efihliweyo
Ukungalingani phakathi kofakelo olusemthethweni nolungekho mthethweni lweekhamera ezifihliweyo namhlanje yinto eqhubeka nokudida abantu kwi-United States yaseMelika kwaye babuza malunga neemeko ezisemthethweni zokusetyenziswa kwekhamera efihliweyo. Isizathu soku kukuba umzuzu xa ikhamera efihliweyo ingabikho semthethweni inokuba yindawo engwevu. Ilizwe ngalinye laseMelika laseMelika linemigaqo nemithetho yalo malunga nokuba semthethweni kweekhamera ezifihliweyo, zisenza ukuba kube lukhuni ukwenza ukufakwa kwezixhobo zokubukela. Ngokubanzi, nangona kunjalo, akukho semthethweni ukurekhoda ividiyo yokujonga kunye nekhamera efihliweyo kwindawo kawonke-wonke okanye ekhaya ngaphandle kwemvume yomntu omrekhodayo. Nangona kunjalo, ezinye izaphulelo kufuneka zilandelwe, okanye ziye zingabikho mthethweni. Yazi le nto kwaye umthetho welizwe lakho uya kwenza kube lula kuwe ukuba uthathe isigqibo sokuba ukufakelwa kwekhamera yakho yokhuseleko kulungile nomthetho okanye akunjalo.
Nokuba unyanzelisa inkqubo yakho yokhuseleko, ukubeka ikhamera kwindawo osebenza kuyo, okanye uthathele ingqalelo ukufakwa kwekhamera ngaphandle kwendlu yakho, uyothusa kakhulu xa usaphula nayiphi na imithetho kwinkqubo. Ngaba kufuneka uvuselele abantu ukuba baphantsi kweliso lwekhamera? Ngaba kukho iindawo ezimbalwa ezingekho mthethweni xa kufakwa ikhamera? Ngokuqinisekileyo ufuna ukuzifundisa ngobunyani bokubekwa kweekhamera ezifihliweyo, kuthathwa njengolwaphulo-mthetho lokubanjwa kwabantu ngokungekho semthethweni akuyi kulunga xa usiya phambili.
Siza kuqaphela ezona ndawo ziqhelekileyo zokuthatha ikhamera, kwaye xa sithathwa njengesemthethweni ngokuchasene nomthetho.
Ubunyani bokuhlola buyeyona nto iphambili kwimicimbi yokuziphatha. Ngelixa umthetho wobumbano udla ngokujonga ukupela okusemthethweni, kukho imizekelo xa ukupela kungabikho semthethweni. Ukubeka ikhamera efihliweyo kwindawo yabucala okanye ngenjongo yentiyo kwenza ukuba ukusetyenziswa kweekhamera ezifihliweyo kungabikho semthethweni. Kuba iindidi zamazwe zineseti eyahlukileyo yemithetho yokusetyenziswa kophando kunye nokurekhoda itekhnoloji kufuneka uyaziwa ngale mithetho kurhulumente wakho. Kwiindawo zabucala ezifana negumbi lokuhlambela, akukho semthethweni ukusebenzisa iikhamera zokuhlola njengoko abasebenzisi bezi ndawo benolindelo olusengqiqweni lwangasese.
Imithetho malunga neekhamera ezifihliweyo:
Ngamanye amaxesha, unokunyanzela ukuba usebenzise ikhamera efihliweyo. Ngaphambi kokufaka ikhamera, unokumangaliswa yimibuzo ethile yokuziphatha kunye nokusemthethweni. Ngaba iikhamera ezifihliweyo zisemthethweni? Ngaba kufuneka ndixelele umxholo malunga nobukho beekhamera ezifihliweyo? Kuwo onke ama-50 e-United States yaseMelika, ukusetyenziswa kweekhamera ezifihliweyo kusemthethweni. Xa sikwindawo kawonkewonke, kusemthethweni ukurekhoda iividiyo ezifihlakeleyo usebenzisa iikhamera ezifihliweyo. Ezi ndawo ziquka iipaki zangaphandle, iivenkile zokutyela, iivenkile ezithengisa izindlu, iiofisi, amaziko oshishino, kunye nezitalato zedolophu. Imithetho malunga nelungelo lokugcina ubumfihlo lisasebenza ekusetyenzisweni kweekhamera ezifihliweyo kwiindawo zikawonkewonke. Nangona kunjalo, iMaine, South Dakota, Hawaii, Minnesota, New Hampshire, Utah, Kansas, Michigan, Delaware, Arkansas, Georgia, Alabama, nase California inyanzelisa imvume ebhaliweyo yomsebenzi ukuba ube nokufihlwa kwekhamera. La mazwe awakuvumeli ukuqeshwa kweekhamera ezifihliweyo kwiindawo zobuqu nakwiindawo apho izifundo zingacingi ukurekhoda okungagunyaziswanga.
Amazwe, umzekelo, iMichigan ibona kungalunganga ukufaka okanye ukusebenzisa ikhamera efihliweyo ngaphandle kwemvume.
Sonke simamele malunga neekhamera ze-nanny ezo khamera zisetyenziselwa ukucoca unannies wakho ngelixa usemsebenzini okanye uyokuthenga. Ngokwesiqhelo ukuthetha, kusemthethweni e-United States ukurekhoda i-surveillance ebonisa ngekhamera efihliweyo ekhayeni lakho ngaphandle kwemvume yomntu osirekhodayo. Kungenxa yoko le nto ukusetyenziswa kweenkomo ze-nanny kusanda ngokuthe gabalala phakathi kwabazali kunye nabagcini abasebenza ngaphandle kwamakhaya ngemini. Phambi kokuba ubeke ikhamera ye-nanny ekhayeni lakho ukuze ihlolwe abantwana bakho kunye nosapho, kuya kufuneka ufunde imithetho ekwimo yakho.
Ngamanyathelo okhuseleko oluphezulu, unokuthetha negqwetha malunga neendlela ezichaziweyo oceba ukuyisebenzisa ikhamera yakho.
Umahluko omnye obalulekileyo, omele uwugcine engqondweni, ngumahluko phakathi kokurekhodwa komsindo kunye nokurekhodwa kwevidiyo. Kwinkoliso yamazwe, kukwaphula umthetho ukurekhoda iividiyo zekhamera ezifihlakeleyo kwiindawo apho izifundo zakho zinolindelo olufanelekileyo lokuba ngasese. Kumakhaya akho, ezi ndawo zinokubandakanya igumbi lokuhlambela kunye namagumbi okulala ukuba izifundo zakho zihlala ekhayeni lakho.
Iikhamera zifihlwe kwiiwotshi, i-teddy-bears, njl. Njl. Ezi zixhobo zibonelela abazali ngokuzola kwengqondo ngelixa oonogada beza kuzokugcina abantwana. Njengoko unokucinga, olona lawulo luqinisekileyo uya kuze uhlangane nekhamera yokubukela ikwizinto zakho. Ngokubanzi, ukufihla ezi nanny-cams kusemthethweni. Into efanayo ihamba nenkqubo yokubekwa kweliso ngaphandle kwekhaya lakho nakwipropathi yakho. Indlela ukhetha ukuyisebenzisa ikhamera kwipropathi yakho iya kuba yinto enkulu kumatyala abekwe enkundleni. Isiseko kukuba: zive ukhululekile ukuqesha iikhamera ezifihliweyo nangayiphi na indlela ozibona zilungile ekhayeni lakho nje ukuba iindwendwe zakho zinolindelo oluhle lwangasese. Kwikhaya lakho, ezi ndawo zinokubamba igumbi lokuhlambela okanye amagumbi okulala ukuba isifundo sihlala kwipropathi.
Ukuhlola abantwana, kwelinye ikhaya akukho semthethweni ukuba umntwana wakho uya kwikhaya lomhlobo, nokuba kukhuseleko lwabantwana bakho.
Ayingombuso wonke othintela ngokukodwa ukusetyenziswa kweekhamera ezifihliweyo kwiindawo apho isifundo sinokuba nolindelo olufanelekileyo lokuba ngasese. Kodwa oko akuthethi ukuba kuya kufuneka uthathe ukuba kusemthethweni- okanye kuyanelisa ngokokuziphatha- ukurekhoda imisebenzi yomntu ngaphandle kwemvume yakhe nakweyiphi na indawo yabucala.
Kwakhona hlala ukhumbula ukuba akukho semthethweni eUnited States ukurekhoda ividiyo okanye iaudio ngesizathu esivakalayo sokungamanyazi okanye ezinye iinjongo ezimbi. Nokuba ulandela yonke eminye imithetho elawula ukubekwa esweni okufihlakeleyo kwilizwe lakho, kubalulekile ukuba wazi ukuba amalungelo akho ayabanjwa xa uzibandakanya nolwaphulo-mthetho. Ukukhangelwa kweekhamera ezifihliweyo, unokusebenzisa iimveliso zethu ezisemgangathweni, ngeenkcukacha ezithe kratya Cofa apha.
Nangona kunjalo, xa sithetha ngamakhaya, ukuba ukhonza iindwendwe ze-Airbnb okanye naluphi na olunye uhlobo lwabantu olwamkelayo ekhayeni lakho, akukho semthethweni ukubahlola. Igatya "ukulindela ubumfihlo", lo mmiselo ubonakalisa ukuba iikhamera ezifihliweyo azikho semthethweni ngasese, ukubandakanya amagumbi okulala namagumbi okuhlanjwa. Ukuba ungumphathi we-Airbnb, akuvumelekile ukubeka ikhamera kwigumbi lakho lendwendwe. Ukuba ucinga ukuba usafuna ukubeka ikhamera kwezi ndawo, kufanelekile ukuba undwendwele uzibukele. Nangona kunjalo, lo ngumba owahlukileyo ngokupheleleyo kuya kufuneka uhlengahlengise kwi-Airbnb njalo njalo.
Ukufakwa kwabantu kwiKhamera efihlakeleyo:
Ukuseta iikhamera kwikhaya lakho yinto enye, njani ngokubeka kwindawo kawonkewonke? Ngokwesiqhelo, ukusetyenziswa kweekhamera zokujonga, kwindawo kawonkewonke ezinje ngeevenkile, iivenkile zokutyela, okanye ezinye iindawo zeshishini zisemthethweni. Abantu abangaphandle kwiindawo zikawonke-wonke sele belahla ubumfihlo babo. Kusemthethweni ukurekhoda ividiyo efihlakeleyo ngasese kwiindawo zokuthenga, ezitratweni zedolophu, ezipakini, okanye kwiindawo zikawonke wonke. Ukulindela ngokufanelekileyo izikhokelo zabucala kusebenza kuseto lweekhamera ezifihliweyo kwiindawo zikawonke-wonke. Akukho semthethweni ukurekhoda ividiyo eyimfihlo kumagumbi okutshixela, amagumbi okutshintsha, amagumbi okulala, amagumbi ehotele, kunye nezinye iindawo zabucala.
Ikhamera efihliweyo kwindawo yokusebenzela:
Akukho rhulumente waseburhulumenteni eUnited States of America okanye oorhulumente bamazwe abaseke imithetho elawula ukurekhodwa kweekhamera okufihlakeleyo kwindawo yokusebenza. Ukuba ufuna ukuseta ikhamera efihliweyo kwindawo osebenza kuyo, ugunyaziswe ngokusemthethweni ukuba wenze njalo. Okwangoku, abanini bamashishini eUnited States bahlala bephakathi kwamalungelo abo asemthethweni ukuba bafaka iikhamera ezifihliweyo kwiiofisi zabo nakwezinye iindawo zeshishini. Abanini bamashishini abanyanzelekanga ngokusemthethweni ukuba baxelele abasebenzi babo ngobukho beekhamera ezifihliweyo, nangona abanini bamashishini abaninzi bekhetha ukwazisa abasebenzi babo ngobukho beekhamera ezifihliweyo. Ikhutshwe kwizikhokelo ezimiselwe yiBhodi yeSizwe yoBudlelwane bezaBasebenzi, imibutho emikhulu – ngakumbi leyo ethatha abasebenzi bemanyano – ihlala ixoxa kunye neemanyano zabasebenzi ezifanelekileyo ukumisela imigaqo elawula ukusetyenziswa kweekhamera ezifihliweyo. Kodwa kwakhona, bambalwa abachaziweyo kwimithetho yomanyano okanye yelizwe efuna ukuba benze njalo. Njengosomashishini, xa unamalungelo asemthethweni okuseta ikhamera efihliweyo kwindawo yakho yeshishini ukubeka esweni imisebenzi yabasebenzi bakho. Abasebenzi banelungelo elisengqiqweni lokuba nemfihlo kwii-ofisi zabo nakwiindawo abasebenza kuzo. Ukuba wophula imfihlo yabasebenzi bakho emsebenzini, banelungelo lokukuthathela amanyathelo asemthethweni. Uninzi lwabanini lwazisa abasebenzi babo ngokusetyenziswa kweekhamera kwiindawo zabo ngenxa yoko banikwa ukuzithemba ukubonisa indlela yokuziphatha kwabo, kodwa akunyanzelekanga.
Ndichaza amava am obuhlobo bokusetyenziswa kweekhamera ezifihlakeleyo kwindawo yokusebenza. Ndifundise kwiSikolo sabaTitshala, eChakwal, ePakistan esinye sezikolo ezikhokelayo esixekweni. Umnini wesikolo wasebenzisa iikhamera ezifihliweyo kwigumbi lokufundela kunye namagumbi abasebenzi ukubeka iliso kwimisebenzi yootitshala nakubafundi. Ngokumisela iikhamera ezifihliweyo kumagumbi okufundela nakwamanye amagumbi esikolo, iNqununu kunye nomnini wesikolo babefuna ukujonga ukutshutshiswa ngokwasemzimbeni ngabafundi kuba bambalwa ootitshala beqala ukohlwaya ngokwasemzimbeni abafundi babo. Bakwafuna ukugcina ootitshala babo bephaphile ngexesha lomsebenzi wabo wokunyusa umgangatho wemfundo. Ke, kukwakhona okusemthethweni apha ePakistan.
Ukuphononongwa kwezinye izixhobo:
Ukujongwa komsindo yenye yezixhobo ezinamandla zokujonga abasebenzi bakho kwindawo osebenza kuyo xa ungekho. Imithetho yokuKhangelwa kweKhamera efihliweyo ayichazwa njengemithetho ejikeleze uphononongo lomsindo. Ukuba ufuna ukurekhoda incoko phakathi komntu okanye umnxeba, umthetho-siseko wase-United States of America uchaza ukuba okungenani elinye lamaqela makwaziswe imvume yokurekhoda. Yaziwa ngokuba yimvumelwano yeqela elinye kunye nendlela uninzi lwamazwe aseMelika aseMelika enza ngayo namhlanje. I-California, i-Connecticut, i-Florida, i-Illinois, iMaryland, iMassachusetts, iMontana, ne-New Hampshire, iPennsylvania kunye ne-Washington yimimandla apho imvume yamaqela mabini ilawula khona. IHawaii ivumela imvume yeqela elinye lokurekhodwa, kodwa ukuba isixhobo esirekhodiweyo sikwindawo yabucala sifuna imvume yamaqela amabini.
Chonga amalungelo akho:
Ukuba ucinga uphantsi kweliso levidiyo ngokungekho semthethweni, unokufumana lula ikhamera yokufumana ikhamera efihliweyo, iibhugi zomsindo kunye nezixhobo zokulandela umkhondo. Nxibelelana necandelo lethu lokujonga ukuqaphela ukuze uthenge enye yezi zixabiso ngexabiso eliphantsi, Cofa apha. Ngaphezulu kwayo yonke into, unokuzifundisa ngendlela yokubeka ezi khamera zifihliweyo. Ukuba ulundwendwe lwe-Airbnb, ungamazisa lowo usamkelayo kwi-Airbnb. Izinto ezifanayo ziyaqhubeka kwiihotele. Kuya kufuneka uyazi into yokuba xa ikhamera efihliweyo isemthethweni kwaye xa ingekho semthethweni.
Ukusetyenziswa kweekhamera ezifihliweyo, ezipakini, kwiivenkile zokuthenga, ezikolweni, kwiikholeji, kumaziko oshishino, kwiiofisi, kwiindawo zokutyela, kwiihotele, kusemthethweni kodwa kumagumbi okulala, kwigumbi lokuhlambela, nakwezinye iindawo zokhuselo lobuqu obufihliweyo akukho semthethweni ukuzisebenzisa. Ukubeka ikhamera efihliweyo kwindawo ngasese okanye kwinjongo ezimbi kwenza ukusetyenziswa kweekhamera ezifihliweyo akukho semthethweni.
Nokuba ungumqeshi wenkampani okanye oweshishini okanye ungumqeshwa ukuba izikhokelo zomthetho zisenokungacacanga kuwe kwaye uneenkxalabo malunga nokufakwa kunye nokusetyenziswa kweekhamera ezifihliweyo kunye nokuhlola? Xoxa nengcali yezomthetho okanye igqwetha eliza kukunceda uqonde indlela yokusebenzisa iikhamera zakho ezigqunywe ngokusemthethweni. Ukufumana ikhamera efihliweyo yeyakho ukuba ulungekile ngenxa yovavanyo olufihliweyo nceda undwendwele iwebhusayithi yethu ngemveliso esemgangathweni. Izixhobo ezikumgangatho ophezulu zokufumana iikhamera ezifihliweyo ziyafumaneka.
6612 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-16 Namhlanje